Andinin-teny 14 ho an'ny tanora katolika | Torohevitra matanjaka?
Ny fahatanorana sy firotsahana amin'ny asan'ny Tompo dia zavatra sarobidy indrindra, indrindra amin'izao fotoana izao izay toa sarotra kokoa ny zava-drehetra. Ny tanora dia miova foana ary zava-dehibe ny mahafantatra ireo Andinin-Baiboly ho an'ny Katolika tanora ny fananantsika dia isaky ny mila izany isika.
Teknika tanjaka, fampaherezana, ohatra ary fananarana manokana ho an'ny tanora izay nanapa-kevitra ny hanompo ny Tompo. Voarakitra ao amin'ny soratra masina ireo andininy rehetra ireo ary tsy maintsy maniry hahalala ny teniny isika, hahafantatra azy lalindalina kokoa.
Mila tanora isika hampitodika ny sainy amin'ny Tompo, feno fahotana be dia be, very amin'ny fanirian'izao tontolo izao ary vitsy dia vitsy ireo izay manararaotra manatona an'Andriamanitra ary izany dia tokony hampanahy ny fiaraha-monina manontolo. .
Raha maniry ny hanatona an'Andriamanitra bebe kokoa ianao na tanora ianao na efa nanompo azy nefa mitady teny manokana ho anao ianao, azo antoka fa tena hanampy be aminao io andininy io isan'andro.
1 1. Manohana ny tanora Andriamanitra
2 2. Andriamanitra no anilanao
3 3. Matoky ny herin'Andriamanitra
4 4. Manana ny fanampian'Andriamanitra ny tanora
5 5. Miaro antsika rehetra ny Tompo
6 6. Manoro hevitra ny tanora Andriamanitra
7 7. Andriamanitra no momba antsika
8 8. Mandehana amim-pinoana
9 9. Mino ny herin'i Kristy.
10 10. Manaiky finoana ao am-ponao
11 11. Mangataha fanampiana avy amin'Andriamanitra rehefa ilaina izany
12 12. Mandresy ny sakana rehetra ny finoana
12.1 13. Andriamanitra dia fanantenana
13 14. Hitoetra eo akaikin'ny Tompo foana aho
1. Manohana ny tanora Andriamanitra
1 Samuel 2: 26 "Ary Samoela lehibe dia lehibe, ary nekena teo anatrehan'Andriamanitra sy teo anatrehan'ny olona."
Ao amin'ity andalan-tsoratra masina ity dia voalaza momba ny tovolahy iray izay lehibe tao amin'ny tempoly aho satria ny reniny rehefa niteraka izy dia nanome azy ny Tompo sy i Samuel raha zaza dia mahalala ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra. Tantara iray ho an'ny tanora katolika tanora izay manapa-kevitra ny hanompo an'Andriamanitra hatramin'ny fahatanorany.
2. Andriamanitra no anilanao
Matio 15: 4 «Satria nandidy Andriamanitra nanao hoe: Manajà ny rainao sy ny reninao; ary: Izay manozona ny ray na ny reniny dia maty tsy azo ihodivirana ”.
Ity dia fantatra fa ny didy voalohany izay mitondra fampanantenana ary mahaliana fa natao tsy ho an'ny tanora ihany fa amin'ny rehetra amin'ny ankapobeny. Na izany aza, ny tanora dia mifanaraka amin'io teny io satria maro amin'izy ireo no mandia dingana sarotra ary avy eo dia avelan'ny Tompo miaraka amin'ny torohevitra sy fampanantenana lava ny fiainana lava izy ireo.
3. Matoky ny herin'Andriamanitra
Fitomaniana 3:27 "Tsara ny mitafy ny ziogany hatry ny fony izy mbola kely."
Ny tanora ao amin'Andriamanitra dia mety tsy mavesatra fa mahafinaritra ny manompo azy amin'ny andro izay toa zato isan-jato ny herintsika sy ny fanahintsika. Ny fahatanorana dia tsara ary raha manome ny tenantsika isika hiaina izany eo ambanin'ny fitsipik'Andriamanitra sy ireo ôrdônansin'ny finoantsika dia hanana tanora sambatra isika amin'ny fotoana rehetra.
4. Manana ny fanampian'Andriamanitra ny tanora
1 Timoty 4:12 "Aoka tsy hisy aminareo hanana ny fahatanoranao, fa ho tonga ohatra ho an'ny mpino amin'ny teny, ny fitondran-tena, ny fitiavana, ny fanahy, ny finoana ary ny fahadiovana."
Imbetsaka amin'ny fahatanorany sy milaza fa maniry ny hanompo ao am-piangonana na hanome ny fontsika amin'ny Tompo isika, dia tsy raisina ho zava-dehibe ary, mifanohitra amin'izany, mihomehy isika, fa eto kosa dia manome torohevitra sy famporisihan'ny Tompo antsika haka fanapahan-kevitra ny hanaraka azy na dia mbola tanora aza isika.
5. Miaro antsika rehetra ny Tompo
119 Salamo: 9 “Ahoana no hanadiovan'ny zatovo ny lalany? Amin'ny fitandremanao ny teninao. ”
Ny lalan'ny Katolika tanora sy izay rehetra manao ny finoana ao am-po, mila diovina hatrany satria matetika maloto ary avy eo dia tafintohina isika. Eto amin'ity andalan-tsoratra ity dia manontany antsika Andriamanitra ary manome antsika ny valiny. Ny fomba tokana mba hanazavana ny lalantsika dia ny mitazona ny tenin'Andriamanitra.
6. Manoro hevitra ny tanora Andriamanitra
Jeremia 1: 7-8 «Ary hoy Andriamanitra tamiko: Aza manao hoe: zaza aho; satria handeha any amin'izay anirahako anao ianao, ary hiteny izay rehetra andefasako anao ianao. Aza matahotra eo alohan'izy ireo, satria miaraka aminao no hanafahako anao, hoy Andriamanitra ”.
Ny fametrahana ny tsy fandriam-pahalemana dia azo atolotra antsika amin'ny fotoana rehetra, na firy taona na firy taona isika, fa rehefa mbola kely isika dia toa maniry ny haka ny eritreritsika ireo tsy fandriam-pahalemana ireo. Tokony ho azontsika antoka fa hiaraka amintsika ny Tompo na aiza na aiza ary hitarika antsika hanao zavatra araka ny tokony ho izy, ampaherezany antsika Izy.
7. Andriamanitra no momba antsika
1 Korintiana 10:23 “Ara-dalàna amiko ny zava-drehetra, saingy tsy ny zavatra rehetra no mety; ara-dalàna amiko ny zavatra rehetra, fa tsy ny zavatra rehetra kosa mampandroso ”.
Ity andalan-tsoratra masina ity dia manandrana milaza amintsika fa na dia vitantsika aza ny manao ny zava-drehetra, dia ny milaza fa manana ny faniriana isika ary ny hery hanao ny zava-drehetra na dia tsy tsara aza izany dia tsy azontsika atao satria tsy mety amintsika izany. Hafa ihany isika satria natokana tamin'ny fahazazantsika mba hanompo an'Andriamanitra.
8. Mandehana amim-pinoana
Titosy 2: 6-8 “Mampirisika ny tanora ho malina koa izy; manolotra ny tenanao amin'ny zavatra rehetra ho ohatra amin'ny asa tsara; amin'ny fampianarana maneho ny tsy fivadihana, ny fahamaotinana, ny feo ary tsy azo ovana, ka mahamenatra ny fahavalo ary tsy misy zavatra ratsy holazaina anao. "
Famporisihana fa tsy mila ho an'ny tanora ihany isika fa amin'ny fotoana rehetra. Lahatsoratra baiboly izay azonao atokana amin'ny namanao na manome amin'ny havanao. Manazava mazava sy aminny antsipirihany ny fomba tokony halehantsika ny fihetsika fa tsy any am-piangonana ihany fa any ivelany koa.
9. Mino ny herin'i Kristy.
- Ohabolana 20:29 "Ny voninahitry ny tanora no heriny, ary ny hatsaran'ny anti-panahy dia antitra."
Ny tanora, amin'ny ankamaroan'ny tranga, dia mahery vaika, matanjaka, tsy matahotra ary tsy matahotra na inona na inona, fa ny zokiolona sy ny navelany kosa dia ny hankafy fiainana tsara. Izany dia azo atao na oviana na oviana rehefa manokan-taona faran'izay tsara indrindra amin'ny fanompoana an'ny Tompo isika ary alain'ny fanirian'ny nofo.
10. Manaiky finoana ao am-ponao
2 Timoty 2:22 “Mandosira ny filan'ny tanora ihany, ka manohiza ny rariny, finoana, fitiavana ary fihavanana, miaraka amin'ireo izay miantso ny Tompo amin'ny fo madio ”.
Fahavalo mahery vaika ny filan'ny tanora ary izany no antony tsy ahitanay miatrika izany fa tokony handositra azy ireo isika amin'ny fotoana rehetra. Angamba ny fananana fitondran-tena tsy azo tanterahina amin'ity resaka ity dia antony hanesoana fa fantaro fa avy amin'Andriamanitra ny valisoa fa tsy avy amin'ny olona
11. Mangataha fanampiana avy amin'Andriamanitra rehefa ilaina izany
Salmo 119: 11 "Tao am-poko dia nitandrina ny teninao mba tsy hanotanao aminao."
Tsy misy zavatra tsara kokoa afa-tsy ny mameno ny fontsika tanora amin'ny tenin'ny Tompo. Ireo teny voalaza ireo dia hita ao amin'ny tenin'Andrimanitra ary zava-dehibe ny hitondrantsika azy ireo lalina ao anatintsika ka rehefa mila ireo andinin-teny ireo isika na ireo teny ireo dia manome hery sy fiadanana ho antsika, ankoatry ny fitazomana antsika amin'ny ota.
12. Mandresy ny sakana rehetra ny finoana
Efesiana 6: 1-2 «Anaka, maneke ny ray aman-dreninao ao amin'ny Tompo, satria tsara izany. Hajao ny rainao sy ny reninao, izay didy voalohany amin'ny teny fikasana.
Tsy ny mankatò ny ray aman-drenintsika ihany fa ny fankatoavana an’Andriamanitra ihany koa, fanao izay manomboka ao an-tokantranontsika, rehefa mankatò ny ray aman-dreninay ianao dia manatanteraka ny tenin’Andriamanitra ary hiandraikitra ny fanatanterahana ny fampanantenany izy. Ara-drariny ny hankatoavantsika ny ray aman-dreny sy Andriamanitra, aza hadino mihitsy.
13. Andriamanitra dia fanantenana
Salmo 71: 5 "Satria ianao, ry Tompo Andriamanitra ô, no fanantenako sy fiarovana ahy hatramin'ny fahatanorako. "
Ny zandry kokoa dia manokan-tena ho an'ny fanompoana ny Tompo, tsara kokoa. Ny fananana fiainana omena an Andriamanitra izay nahary antsika, izay nanome antsika fiainana, izay miaraka amintsika amin'ny fotoana rehetra ary tia antsika tsy misy fepetra dia ny famatsiam-bola tsara indrindra azontsika atao. Enga anie izy ho herintsika sy fanantenantsika hatramin'ny mbola tanora.
14. Hitoetra eo akaikin'ny Tompo foana aho
Josoa 1: 7-9 "Mahereza sy matanjaha tsara, dia hitandrina ka hanao araka ny lalàna rehetra, izay nandidian'i Mosesy mpanompoko anao, aza miala aminy, na ho amin'ny ankavanana, na ho amin'ny ankavia, mba hambinina ianao amin'izay rehetra ataonao. Tsy hiala eo am-bavanao ity boky misy ny lalàna ity, fa misaintsaina azy andro aman'alina, hitandremanao sy hanaovanao izay rehetra voasoratra eo; satria amin'izay dia hambinina ny lalanao ianao ary hahita soa ny zava-drehetra. Mandidy anao aho mba hiezaka sy hatanjaka; aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Andriamanitrao amin'izay rehetra alehanao.
Soso-kevitra iray feno sy manokana izay fanasana koa mba hameno anay ny herinao hiatrehana zava-tsarotra. Tsy maintsy miezaka sy be herim-po isika, satria katolika tanora maro ny fanamby tsy maintsy atrehintsika ary izany dia rehefa mahazo hery. Aoka tsy handroso isika Ireo lalan'Andriamanitra Satria izy dia mpiara-miasa aminay.
Amboary ny herin'ireto andinin-teny ireto miaraka amin'ny torohevitra ho an'ny tanora katolika.
Vakio ihany koa ity lahatsoratra ity Andininy 13 mampahery y Andininy 11 momba ny fitiavan'Andriamanitra.